असार १० गते शुक्रवार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल – List Khabar
Home / धर्म सस्किर्ती / असार १० गते शुक्रवार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
असार १० गते शुक्रवार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
admin5days ago धर्म सस्किर्ती Leaveacomment 257 Views
कलेजोको क्यान्सर यस्ता पाँच गल्तीले हुनसक्छ, यस्ता लक्षण देखिय वेवास्ता नगर्नुहोस
अप्रिल महिनामा ग्रहचक्रमा हुनेछन् ठूला उथलपुथल, यी ४ राशिको हुनेछ दुबै हातमा लड्डु !
समुद्रशास्त्रअनुसार यी ६ गुण भएका युवती भाग्यमानी
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) सामाजिक सेवामा काम गर्दै आउनुभएको छ भने मानसम्मान मिल्नेछ । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । आफूभन्दा उच्च व्यक्तिबाट सम्मान प्राप्त हुने छ । आजको दिन मनमा खुसी छाउने छ । आज परिवारका सदस्यलाई कुनै नयाँ अध्ययन सामग्री खरिद गरेर दिनुहोला ।
बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) आज आकस्मिक धनलाभ हुनेछ । व्यापारबाट सोचभन्दा बढी आर्थिक लाभ प्राप्त हुनेछ । दाम्पत्य जीवनमा सुख प्राप्त हुनाका साथै यात्राको अवसर प्राप्त हुनेछ । मनमा सकारात्मक सोच र खुसी हुने खबरले उत्साह थपिने छ । बगलामुखी दर्शनले दाम्पत्य जीवनमा खुसियाली छाउने छ ।
मीथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) धनलाभ र नयाँ नयाँ खबरले मनमा खुसियाली छाउने छ । घर परिवार र आफन्तसँग केही विषयमा विवाद हुनसक्छ । त्यसैले आजको दिन कम बोल्ने र अर्काका कुरा सुन्ने गर्दा राम्रो हुनेछ । राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि अनावश्यक आरोप लाग्न सक्छ ।
कर्कट राशि (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) सोच र परिवारका कुरा नमिल्दा नकारात्मक सोच आउनसक्छ । अध्ययन अध्यापनमा मन लगाउनु होला । सोच अनुसारका काम नहुँदा नकारात्मक धारणा आउनसक्छ । आज मौन रहनु, नियमित काम बाहेक अन्य काममा त्यति धेरै ध्यान नदिनुहोला ।
सिंह राशि (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) सिंह राशिका जातकले बिहीबार सूर्योदयको दर्शन गर्नुहोला । अनावश्यक विवाद हुनसक्छ । आजको दिन भुलेर पनि कसैसँग विवाद नगर्नुहोला । अध्ययनमा रुचि छ भने नयाँ पुस्तक अध्ययनको थालनी लागि शुभ हुनसक्छ । आजको दिन मौन रहन उत्तम हुनेछ ।
कन्या राशि (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) आज यात्रा गर्नुपर्ने हुनसक्छ । आफन्त र मित्रजनबाट साथ र सहयोगको प्रस्ताव आउनसक्छ । आजको दिन नयाँ बस्त्र खरिद गरेर लगाउन राम्र्रो हुनेछ । स्त्रीजातिको साथ र सहयोग लिएर कुनै काम गर्नु थाल्नुभएको छ भने सोचअनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ ।
तुला राशि (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) मानसिक असन्तोष र सोच अनुसारको काम नहुँदा मनमा चिन्ता थप हुनसक्छ । मनमा सकारात्मक सोच राखेर काम गर्न आवश्यक छ । व्यापारमा हुनुहुन्छ भने आजको दिन फाइदा हुन्छ । धैर्यको आवश्यकता हुन्छ । आजको दिन गणेशको मन्दिरको दर्शन गरेर काम शुरु गर्दा शुभ हुन्छ ।
बृश्चिक राशि (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) बिहान सूर्योदयको दर्शन गरेर दिनको शुरुवात गर्नुहोला । मनमा प्रसन्नता र उत्साह बढ्ने छ । कुनै नयाँ कामको शुरुवात समेत गर्न सक्नुहुनेछ । कामबाट सफलता प्राप्त हुनेछ । अनावश्यक आरोप लाग्नसक्छ । आफ्नो नियमित काम गर्दा होसियारी, धैर्य आवश्यक छ ।
धनु राशि (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोला । आजको दिन व्यर्थमा समय खर्च र अनावश्यक आर्थिक भार थपिने छ । आजको दिन मित्रमण्डलीबाट असहयोग हुनसक्नेछ । साथ सहयोग कसैको नहुँदा पनि तपाईको मनमा उर्जाका लागि देवालय र शिवालयको दर्शन गर्नु जानुहोला । कसैसँग विवाद नगर्नुहोला ।
मकर राशि (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) आजको दिन सोचेअनुसारको काम हुने भएकाले नयाँ काम गर्नसक्नुहनेछ । धेरै खुसी र दुःखी नभइकन आफ्नो काम गरिरहनु होला । मनमा निकै हर्ष छाइरहने छ । बिहान सूर्यनारायणलाई जल दिएर दर्शन गर्नुभयो भने दिन सफल हुनेछ । आजको दिन परिवारको सदस्यहरुबीच सम्बन्ध प्रकाढ हुनेछ ।
कुम्भ राशि (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) मनमा अति प्रसन्नता छाउने छ । कुम्भ राशिका जातकले आजको दिन सोचअनुसारको काम र शत्रुमाथि विजय प्राप्ति हुनेछ । चन्द्रमाको साथ रहेको छ । विहान सूर्योदयको दर्शन गर्नुहोला ।सामाजिक काममा मन जानेछ । तपाईले गरेको कार्यको परिवारका सदस्य समेत खुसी हुनेछन् । आजको दिन कुनै नयाँ काम गर्न सक्नुहुनेछ ।
मिन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) बिहीबारका दिन मीन राशिमा जातकले बिहान सूर्योदयको दर्शन गरेर नजिक वा देवालयको दर्शन गर्नु उत्तम हुनेछ । अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रका कार्य डगर्ने मीन राशि भएका ब्यक्तिले आजको दिन कुनै नयाँ पुस्तक खरिद र लेखनका काम गर्नसक्नुहुन्छ । विद्यार्थी बर्गको लागि विहीबारको दिन कुनै काम शुरु गर्दा सफलता प्राप्त हुनेछ ।
Previous हिजो साँझ काठमाडौंको बानेश्वरमा घटेकाे यस्ताे दु:खद घटना !
Next सुविना गिरी यस्तो अवस्थामा भेटिईन्, श्रीमान र भाञ्जा पक्राउ
यि ३ राशी हुने छोरी बुहारी हुन्छन् लक्ष्मी समान, घरलाई बनाउँछन् स्वर्ग
काठमाडौं, विवाह दुई आत्माको मिलन हो । जहाँ अग्नि साक्षी राखेर कसम समेत खाने खुवाउने …